NgoNovemba 2020 - Iphepha le-27 le-27 - Funda ukuRhweba
I-EUR / GBP ikukuHamba okuMazantsi, ngoMeyi unokubuyela umva kwinqanaba le-0.8977
I-EUR / GBP ibisoloko isezantsi ukusukela ngoSeptemba 11. Uxinzelelo lokuthengisa lufikelela kwi-bearish fisi. Nge-21 ka-Okthobha ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya amanqanaba angama-78.6% eFibonacci. Oku kuthetha ukuba iponti iya kuwa kwaye ibuye umva kwi-1.272 yokwandiswa kweFibonacci. Eli linqanaba eliphantsi le-0.8937. Nangona, ukubuyela umva komkhwa kungayi kubakho kwangoko.
Iintsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 zee-SMA zijike ngokuthe tyaba zibonisa imeko yangaphambili. Iibini zikwinqanaba lama-44 leSalathiso samandla esiNxulumeneyo sexesha leshumi elinesine. Iponti ingaphantsi komda osembindini wama-14 nakwindawo yedrophu.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini se-EUR / GBP sikwi-downtrend. Ngo-Okthobha i-29 yehla; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya amanqanaba angama-78.6% eFibonacci. Oku kubonisa ukuba iponti iya kuwa kwaye ibuye umva kwinqanaba 1.272 Fibonacci ulwandiso. Eli linqanaba eliphantsi le-0.8977.
I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 ziyehla ezantsi. Ibonisa ukwehla. Isibini singaphezulu kwama-25% kuluhlu lwemihla ngemihla. Iphawundi ikwisantya esiphezulu.
Isibini se-EUR / GBP ngoku siwela ezantsi. Uxinzelelo lokuthengisa luphelile. Ngokokuhlalutya kwesixhobo seFibonacci, imakethi inokubuyela umva kwi-1.272 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-0.8977.
Unyulo lukaMongameli wase-US lusondela kuThengiso lweMarike ekulindeleke ukuba lube kuyo
Ukuhlaziywa: 1 Novemba 2020
Izitokhwe zehlabathi ziye zehla ngokuphawulekayo kwiveki ephelileyo, ngokuyinxenye njengoko ukusasazeka kwe-coronavirus kufikelele kwinqanaba elitsha lamaxesha onke. Ngokubaluleke ngokufanayo, abatyali mali baseMelika banciphisile izikhundla zabo ukulungiselela unyulo lukaMongameli. I-yen kunye nedola zaphakama ngokuqatha zaphela zinamandla.
I-euro ibingoyena mdlali ubalaseleyo ukusukela oko ebuyile evalelwa yedwa i-coronavirus kunye nokulindeleka kwe-ECB ngoDisemba. Idola yase-Australia kutshanje ize kwindawo yesibini ethe-ethe njengoko abarhwebi balindele ukuba i-RBA yehlise amaxabiso kule veki. Idola yaseCanada nayo yayiphantsi koxinzelelo lokwehla okukhulu kumaxabiso eoyile.
Kwiintsuku ezizayo, ukungazinzi kuqinisekisiwe, njengoko abarhwebi behlengahlengisa izikhundla zabo nokuba kuxhomekeke ekuqhubekeni komsebenzi wolawulo lwangoku lwase-US, okanye ngokunxulumene nolutsha. Asiyi kuqikelela malunga nesiphumo somdyarho phakathi kukaDonald Trump noJoe Biden.
Ukulindelwa kunyulo lukaMongameli wase-US
Silindele ukufumanisa ukuba ngubani oza kuba ngumongameli olandelayo nge-4 kaNovemba xa kunokwenzeka imeko yokuphumla, apho iziphumo zinokugqitywa khona ngokusekwe kubalo olukhawulezileyo olunje ngeFlorida, iNevada, iTexas, iNorth Carolina neArizona. .
Kwimeko yohlanga oluxakekileyo, sinokufumana imeko efanayo nengxelo ka-2000, xa i-Al Gore ilahlekile ngaphezulu kwenyanga emva koSuku loNyulo. Ngokubanzi, ixesha kunye nokulibaziseka okunokubakho ekubhengezeni ophumeleleyo akuqinisekanga ngakumbi kugqatso oluvaliweyo.
Ezinye izinto eziqwalaselweyo zichaphazeleka ngakumbi kwimeko yomdyarho ongqongqo. Khumbula ukuba zonke iimbambano zonyulo kufuneka zisonjululwe ungadlulanga umhla we-8 kuDisemba ngumthetho wase-US.
tags uDonald Trump, i-eur, UJoe Biden, Unyulo lukaMongameli wase-US, iUSD, yen
I-GBPUSD yokuThengisa ii-Bias ibambe ezantsi phantsi kwenqanaba le-1.3000 njenge-UK kwilizwe lonke laseLockdown liQalisa ukusebenza
Uhlalutyo lwamaxabiso e-GBPUSD-nge-1 kaNovemba
Isibini se-GBPUSD sithumele kwangaphambili ukungena ngaphakathi kwiseshoni yangaphambili kodwa ukuthengisa ukukhetha kuye kwahlala kumgangatho ophantsi kwinqanaba le-1.3000. Inkulumbuso u-Boris Johnson ubhengeze ukuvalwa kwelizwe lase-UK ngoMgqibelo, nokwandisa inkxaso-mali yemivuzo ye-coronavirus. I-GBPUSD isenokuhla isezantsi ekuvuleni kweveki kwaye ilahle inqanaba le-1.2881.
Amanqanaba okumelana: 1.3356, 1.3190, 1.3007
Amanqanaba enkxaso: 1.2881, 1.2675, 1.2252
I-GBPUSD iqale ukuwa okunzulu emva kokubuyela umva ngo-1.3177 ukuxhathisa, ibangela ukuba isibini sidibanise ngezantsi kwe-5 kunye ne-13 yomndilili wokuhambisa ukubuyisa kwi-1.2881. Ukusuka kwinqanaba lobuchwephesha, i-RSI ibambe indawo engalunganga. Ukwehla okuqhubekayo kunokuvula umnyango wokuxhasa kwi-1.2813.
Kwimeko ebanzi, ingqalelo ihlala ikwinqanaba eliphambili lokumelana ne-1.3482. Ukuqhawuka kokuthatha isigqibo kule ndawo kufanele ukwenzeka ngokurhweba okuzinzileyo ngaphezulu kwenqanaba lokuchasana okuthe tyaba, okwangoku okuku-1.3356. Oku kuya kungqinisisa ezantsi ukuya kwixesha elide kwi-1.1409. Nangona kunjalo, ukuphambuka kwi-1.3482 kuya kugcina imvakalelo ye-bearish kolunye uhla olungezantsi kwe-1.1409 kumjikelo wamva.
I-GBPUSD yehle yaya kwi-1.2881 kwiveki ephelileyo kodwa yachacha ngokukhawuleza. Ukuqala kokukhetha kuhlala kungathathi hlangothi kule veki. Kwelinye icala, ikhefu le-1.2881 kufuneka lijike i-intraday bias iye ezantsi ukuze iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isweleke nokuba yiyiphi na, ikhefu le-1.2675 kufuneka liguqule i-intraday bias phantsi ukuze ibuyise i-38.2 ephantsi kunye ne-1.1409% yokubuyisela ukusuka ku-1.3482 ukuya ku-1.2750 kumanqanaba e-XNUMX.
Kwelinye icala, nangona kunjalo, ikhefu le-1.3190 liza kuphinda liqhubeke kwakhona kwi-1.2675 ukuphinda iphinde ibuye i-1.3482 ephezulu. Kwitshathi yeeyure ezi-4, umngcipheko utshintshela kwicala eliphantsi njengoko isibini sidibana nabathengisi kufutshane ne-bearish 5 kunye ne-13 ye-avareji yokuhamba, eqhubeka nokuwa ngaphantsi komgca wokunyuka. Izantsi ngeveki kwi-1.2881 lelona nqanaba lisondeleyo lokuxhasa.
Intshayelelo ekhawulezileyo kwiTekhnoloji yeLebhu ehanjiswayo
Itekhnoloji yedatha ehanjisiweyo (i-DLT) sisakhiwo sedijithali esisetyenziselwa ukubhala / ukurekhoda ukuthengiselana kweeasethi kwiindawo ezininzi ngaxeshanye. I-DLT, ngokungafaniyo noovimba beenkcukacha zemveli, isasazwa kwaye ayinabhunga lolawulo okanye iyunithi yokugcina esembindini. Endaweni yoko, ukuthengiselana kugunyazisiwe kwaye kugcinwa ziindawo ezisasazeke kwihlabathi liphela, emva koko ukuvumelana kwinto nganye kuyaqinisekiswa.
I-DLT, ngaphandle kwamathandabuzo, yinguqu yogcino lwedatha, ukuqokelela kunye nokusabalalisa ifomathi.
Zaqala njani iiLedgers
Iileja bezikho ngaphezu kweminyaka eliwaka kwifom yephepha. Baye bafakwa kwikhompyuter ngokufika kweekhompyuter ngasekupheleni kwenkulungwane ye-20, nangona kunjalo, igcine uninzi lwezinto esele zikhona ezazincitshisiwe.
Ukuqhubela phambili phambili kwinkulungwane yama-21, ukuveliswa kweenkqubo ezinje ngokubhala ngokufihlakeleyo, iinkqubo eziphambili zealgorithmic, kunye namandla amakhulu ekhompyuter kuncede ekwenzeni iinkqubo ezinokuthenjwa zokugcina iirekhodi ezinje ngeencwadi ezihanjisiweyo.
Ukulungelelaniswa phakathi kwe-DLT kunye neTekhnoloji yeBlockchain
Uhlobo oluthandwayo kakhulu lwe-DLT yitekhnoloji yeBlockchain, enegunya kwiimali zedijithali ezinje ngeBitcoin. Iibhloko zeBlockchain zingenisa iibhloksi, ezithi emva koko ziboshwe ngamatyathanga kwaye zisasazwe kuyo yonke indawo yenethiwekhi.
'Iibhloko' kwiibhloko ze-blockchain zinamaqhekeza enkcazelo. Iibhloko zidlala iindima ezintathu kubandakanya:
1- Ukugcinwa kolwazi malunga nokuthengiselana njengexesha, umhla, kunye nenani lokuthenga.
2- Ukugcinwa kolwazi malunga nabathathi-nxaxheba kwintengiselwano. Iitransekshini zichongiwe kusetyenziswa iilebheli zedijithali hayi amagama okwenyani abathathi-nxaxheba, ngenxa yezizathu zokhuseleko.
3- Ukugcinwa kolwazi olwahlula ibhloko enye kwenye. Ibhloko nganye kwi-blockchain igcinwa kusetyenziswa ikhowudi ebizwa ngokuba yi "hash. ' Ukukhawuleza ziikhowudi ze-cryptographic ezenziwe zii-algorithms ezizodwa.
Ukubaluleka kweTeknoloji yeLedger ehanjisiweyo
I-DLT inokuhlengahlengisa kunye nokukhawulezisa ukuthengiselana ngenxa yokususwa kwabaphakathi okanye umzimba ophakathi. Olu phawu, ngenxa yoko, lwenza intengiselwano icace gca kwaye ibe ngexabiso eliphantsi.
Kwakhona, itekhnoloji esasazwayo yeleja ikhuseleke ngokugqithileyo, kunzima ukuyenza ngobuqhetseba, kwaye ubukhulu becala ayinakufikeleleka kuhlaselo lwe-cyber enkosi kwinto yokuba indawo nganye nganye inekopi yayo yonke imicimbi.
Izibonelelo zeTekhnoloji yeLebhu ehanjisiweyo
I-DLT inokuyiguqula ngokupheleleyo inkqubo apho oorhulumente, amaziko, imibutho nemibutho isebenza khona. Ngokuhlengahlengisa ukuqokelelwa kwedatha kunye nokugcinwa, itekhnoloji yeleja esasaziweyo inokunceda ekunikezelweni kwepaspoti, ukurekhoda ukubhaliswa komhlaba, iilayisensi, izibonelelo zokhuseleko, kunye neenkqubo zokuvota.
Okwangoku, itekhnoloji ifumana ukwamkelwa okunzima kumashishini aliqela kubandakanya ezemali, umculo kunye nokuzonwabisa, idayimani kunye nezinto zexabiso, ubugcisa, kunye nokuhanjiswa kwetyathanga lezinto ezahlukeneyo.
Ngelixa i-DLT inezibonelelo ezininzi, okwangoku isaza kufumana ukwamkelwa ngokubanzi kumashishini onke. Nangona kunjalo, enye into eqinisekileyo kukuba iteknoloji ye-ledger ekwi-decentralized yinxalenye ebalulekileyo kunye nebalulekileyo kwikamva.
tags ITEKNOLOJI EYAHLAWULWAYO YOGAWULOSI, DLT, iindaba
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH): I-Ether Bulls Thenga iiDip, iThagethi ye- $ 420 ephezulu
I-Ether idibanisa phakathi kwamanqanaba ama-375 kunye nama-394 eedola
Ukunyuka okuphezulu kusenokwenzeka
Ixabiso langoku: $ 389.05
Intengo yeNtengiso: $ 44,059,391,006
Umthamo wokuThengisa: $ 8,913,925,698
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngo-Novemba 1, 2020
U-Ethereum uqhubekile nokunyuka kwakhe emva kokufumana ngaphezulu kwe- $ 380 yenkxaso. Nge-30 ka-Okthobha, eyona altcoin inkulu yawela ezantsi kwi-375 yeedola njengoko iinkunzi zeenkomo zithenga iidiphu. Ingqekembe iye yenyuka yaza yaphinda yaqala kwakhona i $ 394 ephezulu. Okwangoku, ingqekembe itshintsha phakathi kwe- $ 375 kunye ne- $ 394.
I-Ether iya kuphakama okoko iinkunzi zenkomo zigcina ixabiso ngaphezulu kwe-380 yeedola Ngaphandle koko, ukuphuma kwe- $ 394 kuya kubangela ukuba ingqekembe ibambe ngaphezulu kwe-420 yeedola. Nangona kunjalo, ukuba iinkunzi zeenkomo ziyasilela ukwaphula uxinzelelo lwangoku, indlela esecaleni ihamba phakathi kwe- $ 375 kunye ne- $ 394 iya kuqhubeka.
U-Ether usathengisa embindini wejelo elinyukayo. Ingqekembe ingekaphuli ukuxhathisa kunye nemigca yokuxhasa ijelo elinyukayo. Nangona kunjalo, ixabiso liphula i-SMA yeentsuku ezingama-21 kwaye ifunyenwe ngaphezulu kwayo. Ukunyuka okuphezulu kuya kuqhubeka.
Ukuxhathisa okukhulu ukunyuka kuka-Ether ukuya phezulu kukuchasana ne- $ 420. Ngokwesixhobo seFibonacci, uEther kungenzeka ukuba anyuke. Nge-12 ka-Okthobha uptrend, ikhandlela elibuyisiweyo lavavanya inqanaba lokuphinda kubuyiswe i-61.8 Fibonacci. Oku kuthetha ukuba i-altcoin enkulu iya kuphakama kwaye ifikelele kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo
I-US Wall Street 30 (US30USD) yokudibanisa kunye nokubuyela ngaphezulu kwenqanaba lama-26300
I-US Wall Street 30 (US30USD) yexesha elide iTrends: Bearish
Isalathiso siye saya ezantsi. Ixabiso liwile kwaye lifikelele kwinqanaba lama-26400. Kukho imiqondiso yeempawu eziqhubayo njengoko usihla ezantsi ufikelela kwi-bearish ukudinwa.
I-US30USD -Itshathi yansuku zonke
Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zijonge phezulu. Ixabiso lehle kwinqanaba lama-32 lexesha le-RSI 14. Imakethi ikummandla weDowntrend kwaye ungaphantsi kweziko eliphakathi lama-50. I-US30USD ifikelele kwingingqi ethe kratya kwintengiso.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sisezantsi. Ngo-Okthobha i-28 yedroprend; ikhandlela elibuyise umzimba laphinda lavavanya ukubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-88.6%. Oku kubonisa ukuba isalathiso siya kuwa kwaye sifikelele kumgangatho ophantsi we-1.1129 Fibonacci extensions. Isalathiso eso siya kuwela kwinqanaba lama-26254.50.
US30USD -4 Itshathi yeYure
I-US30USD ingaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kubonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. Ii-SMAs zijonge ezantsi zibonisa uptrend wangaphambili.
Isalathiso se-US30USD siye saya ezantsi. Ixabiso liwile kwinqanaba lama-26300 kwaye liqala kwakhona ukudityaniswa ngaphezulu. Abathengi baphinde baqalisa ukutyhala ixabiso eliya phezulu njengoko isalathiso sifikelele ekuphelisweni kwe-bearish.
Amaxabiso e-GBPJPY ajika phezulu kwiNyanga-ukuphela ukuya kwi-Mid 135.00 kwinqanaba le-Brexit Ukungaqiniseki kugcina iiBulls kuKhuselo
Uhlalutyo lwamaxabiso e-GBPJPY-Novemba 1
Ixabiso le-GBPJPY likwazile ukujija ngaphezulu ekupheleni kwenyanga kwaye yagqitywa ukubonwa ithengisa kunye nokuzuza okuthobekileyo, ukuya kuthi ga phakathi kwe-135.00 yamanqaku engqondo. Ngomso ngumhla woku-1 wokurhweba ngo-Novemba, kwaye iponti ibisokola kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukuya esiphelweni senyanga. Isantya esikhawulezayo sokukhula kwamatyala e-COVID-19 kunye nokungaqiniseki okuqhubekayo kweBrexit kugcina iinkunzi zenkomo zizikhusele.
Amanqanaba okumelana: 144.95, 138.38, 136.62
Amanqanaba enkxaso: 133.04, 131.75, 129.29
I-GBPJPY ikwazile ukubuyisa malunga neepips ezingama-40-50 ukusuka kumgangatho ophantsi wenyanga kwaye okokugqibela kuthengiswa ngeenzuzo ezithobekileyo, ngaphezulu nje kweempawu zengqondo ze-135.00. Le ntshukumo inokuphazamisa uxinzelelo lwexesha eliphakathi kunye nokuqinisekisa ukuqala kwesaphulelo, ekuqaleni ekrokrelwa ukuba sisikhubekiso kumgaqo owonyukayo okhulayo.
Ekuqaleni kosuku lokurhweba, iponti entle yagqobhoza umgca wokuxhasa, yajika yaya kumgca wokumelana ne-135.38, kodwa inqunyelwe ngumndilili ohambahambayo. umzila. Nangona kunjalo, ukuqhawuka okuqinileyo kwe-5 kuya kuphakamisa amathuba okubuyela umva kwexesha elide.
I-GBPJPY iwele kwi-134.40 kwiveki ephelileyo kodwa yachacha ngokukhawuleza. Umkhethe wokuqala awuthathi cala kule veki. Logama nje inqanaba lokumelana ne-137.84 libambe, ukwehla okungaphezulu kunokulindelwa. Ngaphantsi kwenqanaba le-134.40 inokuthi ekuqaleni ijolise kwinqanaba lokuxhasa le-133.04. Ukwaphulwa kwayo kuya kuphinda kwehle ukwehla ukusuka kwi-142.71 ukuya kwi-61.8%, ukubuyela umva nge-123.99 ukuya kwi-142.71 kwinqanaba le-131.75.
I-RSI ikwafumana amandla kwiiyure ezi-4, ngelixa i-avareji ebomvu e-5 ifanele iwele i-13 yomndilili wokuhamba ohlaza okwesibhakabhaka, ibonisa ukulumkisa okukhulayo kwintengiso. Ukuvalwa okungaphantsi kwe-135.00 ethe tyaba yenkxaso kwaye kubaluleke ngakumbi phantsi komgangatho ophantsi we-134.40 kunokubangela ulwandiso olutsha lwe-bearish ukuya kwi-133.04.
I-FTSE 100 (UKX) ithengisiwe ngaphezulu; Abathengi kunokwenzeka ukuba bavele kwinqanaba lama-5620.30
I-FTSE 100 ikwi-downtrend kwaye ifikelele kwi-bearish. Nge-22 ka-Okthobha ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Oku kuthetha ukuba (i-UKX) inokuthi ifikelele kwinqanaba le-1.272 kwaye ibuye umva. Nangona kunjalo, ukubuyela umva akuyi kukhawuleza.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zijonge ezantsi zibonisa ukwehla. Ibonisa imeko yangoku ye-bearish. Okwangoku, isabelo sikwinqanaba lama-30 le-Index yamandla ahlobene. Imakethi isondela kwingingqi ethengisiweyo kwaye ingaphantsi komgangatho ophakathi 50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isabelo sisehla. Nge-Okthobha i-28 yedroprend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-88.6%. Oku kubonisa ukuba isabelo siza kuwa kwaye sifike kwinqanaba le-1.1129 Fibonacci extensions. Leyo yimarike iya kufikelela kuma-5566.30 asezantsi.
Isalathiso singaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike iwele kummandla ogqithileyo kwaye abathengi banokuvela. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla ezantsi.
Isabelo se-FTSE 100 (UKX) sisezantsi. Ukudodobala kuye kwafikelela ekuphelelweni ngamandla yi-bearish, ngokokuhlaziywa kwesixhobo seFibonacci, imakethi iya kuguqula kwinqanaba le-1.272 yolwandiso okanye kwinqanaba le-5620.30 kwaye ibuye umva.
I-NZD / i-USD ifikelela kuMmandla oThengisiweyo, ngoMeyi unokuqhubeka nokuthenga kwinqanaba le-0.6588
Amanqanaba okuGxila aphambili0.6600, 0.6800, 0.7000
I-NZD / i-USD ibikukuhla ezantsi ukusukela nge-28 ka-Okthobha. Isibini siwele kwinqanaba le-0.66105 kwaye lisondela ekuphelelweni ngamandla kwe-bearish. Imakethi ifumana uxinzelelo lokuthenga kwinqanaba le-0.6600 yenkxaso yendawo.
I-Kiwi iwele kwinqanaba lama-46 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Ibonisa ukuba esi sibini ngoku sikummandla wonyuso. I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zithambeka ngokuthe tye zibonisa indlela esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini se-NZD / USD sihamba ezantsi. Esi sibini sifikelele kwi-bearish yokuphela njengoko isibini sizama ukutyhala ixabiso linyuka. Umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba le-Fibonacci engama-88.6%. Oku kubonisa ukuba isibini siya kufikelela kwindawo ephantsi ye-1.1129 kwaye sinokuhlehla. Owona mgangatho usezantsi ngu-0.6588.
Iintsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zihamba ngaphezulu. Ibonisa ukuba isibini sikwi-uptrend. Isibini singaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba intengiso ikwisantya esiphezulu kwaye i-Kiwi ngoku ithengisa kwindawo ethe kratya.
Isibini se-NZD / USD ngoku sithengisa kwindawo ethe kratya kwintengiso. Ngokwesixhobo seFibonacci, imakethi iya kufikelela kwizinga eliphantsi le-1.1129 okanye eliphantsi le-0.6588
← Entsha izithuba 1 ... 26 27abaDala izithuba →